မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးအတွက် ဇန်န၀ါရီ ၄ရက်နေ့သည် အလွန်ထူးမြတ်သည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်ပါသည်။ ဗြိတိသျှအင်္ဂလိပ်တို့ထံမှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့ပြီးနောက် လွပ်လပ်သည့်အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ် ရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့သည်မှာ နှစ် ၇၀ပြည့်မြောက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါသည်။.
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက် မြန်မာဖောက်သည်တော်များအား FBSအဖွဲ့မှ ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောကြားလိုပါသည်။ ယခုကဲ့သို့ သမိုင်းအစဉ်အလာရှိသည့် နေ့ထူးနေ့မြတ်တွင် ဖောက်သည်တော်များအားလုံး ကျန်းမာ ချမ်းသာစွာ ပါဝင်ဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေ.
လွတ်လပ်မှုသည် တန်ဖိုးအရှိဆုံးသော ဆုလာဘ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထိုလွတ်လပ်မှုကို အပြည့်အ၀ခံစားကာ မိမိတို့၏နိင်ငံတော်အား ချစ်မြတ်နိုးကာ တိုးတက်အောင် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်နိုင်ကြပါစေဟု ဆန္ဒပြုလိုက်ရပါသည်!
ပျော်ရွှင်ဖွယ် လွတ်လပ်ရေးနေ့ပါ, ရွှေမြန်မာတို့ရေ!